Medical Writings ဆေးပညာစာများ: TB (Tuberculosis) တီဘီ
ဒီခေတ်မှာ (တီဘီ) ဖြစ်တာ ကံဆိုး-ကံကောင်း အောက်မေ့ပါ။ ဆေးတွေ ပိုကောင်းလာတယ်။ ဆေးသေခြာသောက်ရင် သေခြာပျောက်တယ်။ သေတယ်ဆိုတာ ရှားလာယတ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ (တီဘီ) မဖြစ်တော့လို့ ဆေးကျောင်းတွေမှာ TB သင်မပေးတော့ဘူး။
Pulmonary TB အဆုပ် တီဘီ ရောဂါ လက္ခဏာများ
• သတင်းသုံးပတ်ထက်ပိုသော အချိန်ကာလအထိ ချောင်းဆိုးနေခြင်း၊
• ချောင်းဆိုးသောအခါ တံတွေးမှ သွေးပါခြင်း၊ (Hemoptysis)
• သတင်းသုံးပတ်ထက်ပိုသောအချိန်ထိ ညတိုင်း အဖျားတက်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ချွေးထွက်ခြင်း၊
• အစားအသောက်ပျက်လာခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် လျော့နည်းလာခြင်း၊
• ရင်ဘတ်အတွင်း နာကျင်လာခြင်း။
အဆုပ်အပြင် အရိုး-အဆစ် တီဘီ၊ ဗဟို အာရုံကြောစနစ်၊ (လင့်ဖ်)ကြောစနစ်၊ ဆီး-မွေးလမ်းကြောင်း၊ အရေပြားတို့တွင်လည်း တီဘီရောဂါ ရစေသည်။ အဆုပ်အားဖုံးနေသည့်အလွှာ (Pleura) နှစ်လွှာအကြား အရည်-ပြည်တို့ စုဝေးနေခြင်းဖြစ်စေတတ်သည်။ တီဘီဆေးများအပြင် ၄င်းအရည်-ပြည်တို့အား စုပ်ထုတ်ကုသပေးရန်လိုသည်။
လက္ခဏာများမှာ ယင်းကိုယ်အင်္ဂါများ သာမန်အားဖြင့် အလုပ်လုပ် နည်းပါးလာခြင်းတို့ပင် ဖြစ်သည်။ တီဘီရောဂါ၏ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့် ဆရာဝန်ထံ အစစ်အဆေးခံယူရမည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တီဘီရောဂါ၏ အခြေအနေ
၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သိန်းတရာ့လေးဆယ်သော လူတို့သည် တီဘီရောဂါကို ခံစားနေရသည်။ ယင်းရောဂါသည်များအနက် နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းသောလူတို့သည် ၄င်းတို့မှ အခြားလူများသို့ ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။
၂။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တနှစ်တာကာလအတွင်း ငါးသိန်းသော လူတို့သည် တီဘီရောဂါဖြင့် သေဆုံးကြသည်။
၃။ တီဘီရောဂါသည် ကလေးလူကြီးမရွေး ဖြစ်နိုင်သည်။
၄။ သို့သော် တီဘီရောဂါကို အမြစ်ဖြတ်အောင် ကုသနိုင်သည်။
ဆေးဝါးများကို မှန်ကန်စွာ မှီဝဲခြင်းမပြုပါက မည်သို့ ဖြစ်နိုင်သနည်း။
1. အကယ်၍ ဆေးဝါးများကို မှန်မှန်နှင့် စနစ်တကျ မသုံးစွဲပါက တီဘီရောဂါ၏ လက္ခဏာများ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။
2. ပထမ သုံးစွဲသည့် ဆေးဝါးများသည် အစွမ်းမထက်တော့သည်ကို မကြာခဏတွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရောဂါပိုးများသည် ထိုဆေးများကို ခံနိုင်ရည် ရှိလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြင် ရိုးရိုးတီဘီဆေးများသည်လဲ ထိုရောဂါကို ပျောက်ကင်းရန် အစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ခြေ။
3. ထိုရောဂါသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆေးကုခံရတော့မည်ဖြစ်သည်သာမက ငွေကြေးအကုန်အကျ များပြားလာနိုင်သည့်အပြင် အသက်အန္တရာယ်လည်း ရှိလာနိုင်သည်။
4. အချိန်မှန်မှန်နှင့် စနစ်တကျ ဆေးဝါးများကို မှီဝဲခြင်းမရှိသော တီဘီရောဂါ စဖြစ်သည့်သူများမှာ တီဘီရောဂါ ကုဆေးများက အာနိသင် နည်းပါးလာပါသည်။
1. အများ ပြည်သူလူထုများအား တီဘီရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ပညာပေးခြင်း။
2. တီဘီရောဂါဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆရသောရောဂါသည်များအား ဆေးစစ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
3. ရောဂါဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆရသောသူတို့၏ သလိပ်နှင့် တံတွေးများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
4. တီဘီရောဂါသည်များကို အချိန်မှီ သင့်တော်သည့်ဆေးဝါးများ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
5. တီဘီရောဂါသည်တို့၏ မှတ်တမ်းများကို ပြုစုထားရန်
6. တီဘီရောဂါသည်တို့၏ မိသားစုမှ အခြားသူများအား ဆေးစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း။
7. လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို မကြာခဏ ပြန်လည်စမ်းစစ်သုံးသပ်ရန်။
8. ကလေးများအား တီဘီဂျီ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
1. ရောဂါသည်၏ တံတွေးနှင့် သလိပ်တို့မှ တီဘီရောဂါ၏ ပိုးမွှားကလေးများသည် လေထုထဲတွင် ပြန့်ကျဲကာ အခြားသူများ အသက်ရှူသောအခါနှင့် ချောင်းဆိုးသောအခါတို့တွင် သူးစက်သွားနိုင်သည်။
2. လူများတွင် ရောဂါပိုးကို ခုခံကာကွယ်ရန် ကိုယ်ခံအားနည်းသောအခါတွင် ကူးစက်နိုင်သည်။
3. အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများသည် တီဘီရောဂါပြန့်ပွားကူးစက်ခြင်းကို အားပေးသည်။
o လူသူများ၍ ကျဉ်းကြပ်ပြီး မှောင်မိုက်နေသောနေရာများတွင် အချိန်ကြာရှည် နေထိုင်ရခြင်း။
o အစားအသောက်နှင့် အဟာရ ချို့တဲ့ခြင်း။
o အေအိုင်ဒီအက်စ် နှင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါ ကူးစက်ခြင်း။
1. တီဘီရောဂါသည် ချောင်းဆိုးသောအခါတွင် လက်ကိုင်ပုဝါနှင့် ပါးစပ်ပိတ်၍ ချောင်းဆိုးရမည်။
2. တီဘီရောဂါသည် မိမိတံတွေးကို နေရာတကာတွင် မထွေးရ။ အဖုံးရှိသောခွက်တွင် စံနစ်တကျ ထွေးရမည်။
3. ယင်းတံတွေးများကို မီးရှို့ခြင်း၊ မြေမြှုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုရမည်။
4. တီဘီရောဂါသည်အား ဝင်လေ-ထွက်လေ ကောင်းသောအခန်းတွင် နေထိုင်စေရမည်။
5. ထိုရောဂါသည်များနှင့် ဆက်ဆံမှုရှိသောသူများသည် (၂) နှစ်တာကာလအချိန်အတွင်း တီဘီရောဂါ ကူးစက်ရန် အန္တရာယ် ပိုများလာသည်။ ထိုသူများသည် တီဘီရောဂါ လက္ခဏာ ပေါ်ပေါက်လာပါက လိုအပ်သည့် ဆေးစစ်မှုများကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
6. ရောဂါသည်နှင့် ဆက်ဆံမှုရှိနေကြသော ကလေးများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများအား ရောဂါကူးရန် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိ၍ အထူးသတိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
HIV မရှိသည့်လူနာအတွက် TB ဆေးများ
များသောအားဖြင့် ၆ လနှင့်ရသော်လည်း တချို့ကို ၉ လ ပေးရသည်။
လူနာကို တိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့် ကုသမှု (DOT) နည်း (၃) နည်းအနက် ကြိုက်ရာပေးနိုင်သည်။
(၁) Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Ethambutol တို့ကို နေ့စဉ် (၂) လ ပေးပြီးနောက်၊ Isoniazid + Rifampin ကို ၇ ရက်တပါတ်မှာ ၂-၃ ကြိမ် (၄) လ ပေးရမည်။ စုစုပေါင်း ၆ လ ကြာမည်။
(၂) Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Ethambutol တို့ကို ၂ ပါတ် ပေးပြီးနောက် ၄င်းအတိုင်း တပါတ်လျှင် ၂ ကြိမ် ၆ ပါတ် ပေးသည်။ ထို့နောက် Isoniazid + Rifampin ကို တပါတ် ၂ ကြိမ် ၄ လ ပေးသည်။
(၃) Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Ethambutol တို့ကို တပါတ် ၃ ကြိမ် ၆ လ ပေးသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူအား Pyrazinamide မပေးဘဲ Isoniazid + Rifampin + Ethambutol တို့ကို ၄-၈ ပါတ်ပေးသည်။
Isoniazid နှင့် Rifampin တို့အား ဆေးမယဉ်ဟုသိရပါက Ethambutol ကို မပေးတော့ဘဲ၊ ဆေး ၂ မျိုးထဲ ၉ လ ပေးနိုင်သည်။
ဆေးယဉ်မှာ စိုးရိမ်ပါက Isoniazid + Rifampin + Ethambutol တို့ကိုတွဲပြီး ၉ လ ပေးပါ။
သလိပ်ပိုးမတွေ့သူအား Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide တွဲပြီး ပဌမ ၂ လ ပေးပြီးနောက် Isoniazid + Rifampin တွဲကာ နောက် ၆ လ ပေးပါ။
နေ့စဉ်ပေးနည်း မဟုတ်ဘဲ ၁ ပါတ် ၂-၃ ကြိမ်ပေးပါက Isoniazid, Pyrazinamide, Ethambutol တို့၏ ဆေးအလေးချိန်ကို တိုးရမည်။
Recommended dosages for the initial treatment of tuberculosis
Isoniazid = Daily5mg/kg Max: 300 mg/dose = TwiceaWeek 15 mg/kg Max: 900 mg/dose = Three TimesaWeek 15 mg/kg Max: 900 mg/dose
Rifampin = Daily 10 mg/kg Max: 600 mg/dose = TwiceaWeek 10 mg/kg Max: 600 mg/dose = Three TimesaWeek 10 mg/kg Max: 600 mg/dose
Pyrazinamide = Daily 15–30 mg/kg Max:2g/dose = TwiceaWeek 50–70 mg/kg Max:4g/dose = Three TimesaWeek 50–70 mg/kg Max:3g/dose
Ethambutol = Daily 5–25 mg/kg Max: 2.5 g/dose = TwiceaWeek 50 mg/kg Max: 2.5 g/dose = Three TimesaWeek 25–30 mg/kg Max: 2.5 g/dose
Streptomycin = Daily 15 mg/kg Max: 1 g/dose = TwiceaWeek 25–30 mg/kg Max: 1.5 g/dose = Three TimesaWeek 25–30 mg/kg Max: 1.5 g/dose
1. Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Ethambutol တို့ကို နေ့စဉ် (၂) လ ပေးပြီးနောက်၊ Isoniazid + Rifampin ကို ၇ ရက်တပါတ်မှာ ၂-၃ ကြိမ် (၄) လ ပေးရမည်။ စုစုပေါင်း ၆ လ ကြာမည်။
2. Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Ethambutol တို့ကို ၂ ပါတ် ပေးပြီးနောက် ၄င်းအတိုင်း တပါတ်လျှင် ၂ ကြိမ် ၆ ပါတ် ပေးသည်။ ထို့နောက် Isoniazid + Rifampin ကို တပါတ် ၂ ကြိမ် ၄ လ ပေးသည်။
3. Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Ethambutol တို့ကို တပါတ် ၃ ကြိမ် ၆ လ ပေးသည်။
• ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူအား Pyrazinamide မပေးဘဲ Isoniazid + Rifampin + Ethambutol တို့ကို ၄-၈ ပါတ် ပေးသည်။
• Isoniazid နှင့် Rifampin တို့အား ဆေးမယဉ်ဟုသိရပါက Ethambutol ကို မပေးတော့ဘဲ၊ ဆေး ၂ မျိုးထဲ ၉ လ ပေးနိုင်သည်။
• ဆေးယဉ်မှာ စိုးရိမ်ပါက Isoniazid + Rifampin + Ethambutol တို့ကိုတွဲပြီး ၉ လ ပေးပါ။
• သလိပ်ပိုးမတွေ့သူအား Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide တွဲပြီး ပဌမ ၂ လ ပေးပြီးနောက် Isoniazid + Rifampin တွဲကာ နောက် ၆ လ ပေးပါ။
• နေ့စဉ်ပေးနည်း မဟုတ်ဘဲ ၁ ပါတ် ၂-၃ ကြိမ်ပေးပါက Isoniazid, Pyrazinamide, Ethambutol တို့၏ ဆေးအလေးချိန်ကို တိုးရမည်။
• Isoniazid = Daily5mg/kg Max: 300 mg/dose = Twiceaweek 15 mg/kg Max: 900 mg/dose = Three timesaweek 15 mg/kg Max: 900 mg/dose
• Rifampin = Daily 10 mg/kg Max: 600 mg/dose = Twiceaweek 10 mg/kg Max: 600 mg/dose = Three timesaweek 10 mg/kg Max: 600 mg/dose
• Pyrazinamide = Daily 15–30 mg/kg Max:2g/dose = Twiceaweek 50–70 mg/kg Max:4g/dose = Three timesaweek 50–70 mg/kg Max:3g/dose
• Ethambutol = Daily 5–25 mg/kg Max: 2.5 g/dose = Twiceaweek 50 mg/kg Max: 2.5 g/dose = Three timesaweek 25–30 mg/kg Max: 2.5 g/dose
• Streptomycin = Daily 15 mg/kg Max: 1 g/dose = Twiceaweek 25–30 mg/kg Max: 1.5 g/dose = Three timesaweek 25–30 mg/kg Max: 1.5 g/dose
သလိပ်ပိုးမတွေ့သူအား Isoniazid 300 mg + Rifampin 600 mg + Pyrazinamide2g တွဲပြီး ပဌမ ၂ လ ပေးပြီးနောက် Isoniazid 300 mg + Rifampin 600 mg တွဲကာ နောက် ၆ လ ပေးပါ။